SIDEE LOO XAKAMEYNAYAA DAAQADA JIILAALKA DIBEDDA IYO GUDAHA: DAAQSINTA CAAGAGGA IYO ALWAAXA GURIGA DHEXDIISA - SAMEE NAFTAADA
Marka laga bilaabo bilawga cimilada qaboobaha, ilaalinta kulka qolka wuxuu bilaabmaa inuu ina dhibo. Maadaama biilasha biyaha ee korontadu ay korayaan oo kaliya, dad badan oo badan ayaa u jahawareeraya rinjiga kuleylka. Qiyaasta kuleylka weyn ee kulaylka ayaa ku dhacaya daaqadaha waxayna ku kala duwanaan kartaa 1/3 ilaa 1/2. Dhibaatadani ma ahan oo kaliya macaamiisha daaqadaha alwaax ee hore, laakiin sidoo kale kuwa caaga ah. Si aad u ilaaliso kuleylka iyo bixiso xaalado raaxo leh, daaqadaha waxaa loo xiraa siyaabo kala duwan - qaar waa kuwo ku meel gaadh ah oo aaney sii soconaynin muddo ka badan hal xilli, halka kuwa kale, xoogaa shaqaale badan, ay ilaalinayaan daaqadaha dhawr sano. Maqaalkani, waxaan eegeynaa sababaha ugu muhiimsan ee fashilka iyo sida loola macaamilo.
Sababaha ka mid ah fayadhowrka
Daaqadaha daaqadaha waa kuwo dhaqaale badan oo lagu kalsoonaan karo. Waxay ku sii jiri karaan in ka badan toban sano, laakiin hawlgalka muddada dheer, waxtarka daboolka ayaa ka sii daraya: dildilaaca, boodhka, muraayadda waa la qalajiyay, xitaa barafku inta badan wuu muuqdaa. Tani waxay dhacdaa sababo kala duwan. Kuwaas waxaa ka mid ah qalajinta qoryaha, qaabka qaabaynta daaqadaha ama dhismaha laftiisa. Qalajinta alwaaxda waxay keenaysaa dildilaaca iyo burburinta dhismaha alwaax. Dib-u-dhiska dhismaha wuxuu keeni karaa dariishada si aad u liidato, qaabkeeduna wuxuu u dabacsanaan doonaa derbiga. Tani waxay si deg-deg ah u horseedi doontaa kulayl xumo daran. Daaqadaha caaga ah, marka la barbardhigo daaqadaha alwaaxda, waxaa loogu talagalay inay hagaajiyaan rinjirta kulaylka iyo abuuraan deegaan gudaha ah oo raaxo leh. Laakiin had iyo jeer ma isticmaalaan isticmaalka diirimaad leh - waxaa jira sababo badan oo tan. Sababahaas waxaa ka mid ah:
Dhibaatooyinka leh dariishado labalaab ah;
Qalabaynta tayada lihi waa mushkilad caadi ah oo la xidhiidha shuruudaha hoose ee shaqaalaha shirkadda rakibidda. Waxay dhici kartaa ma aha oo kaliya sababtoo ah dayacaad la'aanta shaqaalaha; khaladaadka waxaa lagu samayn karaa marxaladda qiyaasta, taas oo ah sababta ay daaqadu uuna u adkeysan doonin. Maqaayadda waxaa loogu talagalay inay ka hortagto hargabka qabowga qolka. Meelaha xiran ee shaabadda daaqadda waxaa si fiican loogu xiraa qaabka. Laakiin sababtoo ah saamaynta heerkul hooseeya, gogol-xaadhka ayaa si dhakhso ah u qaloocaya. Gogol-xaadintu waa caqabada ugu weyn ee hawada qabow. Xadgudubka sharaftiisu waxay keeni kartaa baraf ama gogol.
Sidoo kale akhri sida loo diyaariyo shinnida jiilaalka, iyo sida loo daboolo geedka, canab, tufaax, ubax iyo raspberries xilliga jiilaalka.
Sababta waxyeellada farsamada waa hawl aan habooneyn, oo ka timaadda culeysyo culus. Xaaladdan oo kale, ma aha oo kaliya qaabeynta qaabka, laakiin sidoo kale daaqadaha labajibaaran ee daaqadaha iyo dhinacyada waxaa laga yaabaa inay xanuunsadaan. Meeluhu waxay sidoo kale ka caawiyaan daaqadaha. Dhibaatooyinka iyaga ayaa laga yaabaa inay dhacaan sababtoo ah rakibidda liidashada ama xirashada. Natiijo ahaan, qaab-dhismeedku waa la burburiyaa oo dillaacsan ama kaftamaa ayaa la sameeyaa iyada oo qabowgu u galmoonayo. Waxaa jira xiriir u dhexeeya sababaha qaarkood. Tusaale ahaan, rakibidda aan habooneyn waxay keeni kartaa dhibaatooyin la xidhiidha dariishadaha iyo daaqadaha labajibaaran.
Ma taqaanaa? Daaqadaha ugu horreeya waxa lagu abuuray Jarmalka qarnigii XIX.
Goobaha caadiga ah ee la duubo
Ka hor inta aanad bilaabin shaqada daboolka daaqadaha, waxaa lagama maarmaan ah in la tilmaamo meelaha sicir bararka. Goobaha caadiga ah ee daaqadaha alwaaxda ah:
dhig meel iskudhafka daaqada iyo garaaca;
Inta badan dhibco daciif ah ee daaqadaha alwaaxa ah waa isugeynta muraayadaha iyo dhalada cawska, garaaca daaqada iyo wareegyada (gaar ahaan, meelo badan oo furan). Sidoo kale qiimeyntu waa maqnaanshaha iskudhafka daaqadda ilaa furitaanka. Si loo ogaado meesha ay ku duuban yihiin daaqadaha caaga ah, waxaa lagama maarmaan ah in la baaro gudaha gudaha profile profile. Haddii lakabka boodhka ah ee ku dul qoran, markaa meelahaas waxaa jira dhibaatooyin leh rinjir kulul. Marka laga reebo kiiskan waa wareegga sare ee faahfaahinta daaqada. Meeshan, dhismaha boodhka sababtoo ah qaababka naqshadeynta.
Dhis ku samee sawirkaaga: riig riyo ah, ido ah, qol loogu talagalay doofaar iyo digaag digaag.
Daaqadaha caagga ah waxay leeyihiin dhibcooyinka soo socda:
Waxyeelo iyo qaab isku dhafan;
Ma taqaanaa? Sameynta cilmi-baaris ku saabsan hababka kala duwan ee looga hortago saamaynta shucaaca, cilmi-baarayaasha Japan ayaa aqoonsaday alaabooyinka muujinaya kuleylka marka lagu daboolayo muraayadda dhalada.
Aqoonsiga aagagga dhibaatada
Haddii sahan lagu ogaanayo goobaha caadiga ah ee wax lagu duubo ma aysan caawinin aqoonsiga aagga dhibaatada, waxaad isticmaali kartaa habab kale. Habka ugu horreeya waa inaad gacanta ku qortid wareega wareegga daaqada, meesha uu ku dhufanayo, waxaa jiri doona dareen ah kala duwanaanshaha heerkul xoog leh. Fursad kale: si loo baadho gudaha gudaha, laakiin habkani wuxuu ku haboon yahay daaqadaha caagga ah. Haddii siyaabahan fudud ee aan loo ogaan karin in lagu aqoonsado aagagga dhibaatada, markaa waxaad isticmaali kartaa ololka shumaca ama iftiinka. Haddii aad leedahay shumaca gubanaya ee daaqada daaqada ah, isgoysyada jilicsan iyo xayiraadda daaqada, ololku wuxuu bilaabi doonaa inuu oscillate meelaha meelaha la duubo.
Si habboon u qalaji sawirka beertaada, oo ku darso ilaha, dhirta, beerta, gabiyada, dhagaxa qoryaha, dabaasha qurxinta, barafka, barkada iyo barkada beerta.
Maxaa iyo sida loo diiriyo
Cabbiraadyada daaqadaha diiran ayaa loo qaybiyaa laba qaybood: ku-meelgaar ah iyo xaalad ahaanba joogto ah. Ku-meelgaar ah oo sanadle ah oo la qabto bilawga cimilada qaboobaha - kuwan waxaa ka mid ah warqadda rinjiga, suufka, caashinka xumbada. Hababka caadiga ah ee joogtada ah waxaa ka mid ah hababka isticmaalka xumbada isku-xirka, shaabbadeeyaha, dhejiska ama shaabadaha polymer. Aan eegno mid kasta oo ka mid ah hababka kuleylka kuleylka.
Wargeyska (waraaqaha waraaqaha)
Habkani waa mid aad u weyn, waxaa isticmaalay awowayaasheena. Waqti ka dib, habka daaqadaha loo isticmaalayo waraaqo ama waraaqo waraaqo ah ayaa soo maray isbeddellada qaarkood, haddana waxaa jira dhawr fursadood oo lagu fulin karo. Si aad u xirtid godadka daaqadaha iyo meelaha wax lagu dhejiyo, waxaad sameyn kartaa qoraalka warqadda.
Waxaa lagama maarmaan ah in lagu jajabiyo waraaqo wargeys ah, jimicsi biyo, oo lagu daro dhoobo ama jajab loo jajabiyo tiro badan. Iyada oo leh tiro badan oo aan ka dhigno dalxiiska; tani waxay ka fiican tahay isticmaalka mindi ama taliyaha biraha. Qalabkani wuxuu si fiican u galaa meel adag. Si aad uhesho mishiinkan ku dhejisan daboolka dusha ama warqadaha. Waxaad sidoo kale isticmaali kartaa dhar maro ah. Waxaad ku ridi kartaa saabuun iyo biyo: cirridka hore loo qooyay waxay ku dhuuban yihiin saabuun waxayna daboolaan warqada dhererka leh. Kala duwanaansho kale oo habkan ah ayaa ku lug leh xayiridda warqadaha. Goobaha waxaa lagu shaabadeeyaa tuubooyin warqad ah oo lagu qooyey biyo. Qaybaha kala duwan ee muraayadda iyo muraayadda lagu shaabadeeyey maro waraaqo ah, oo lagu riixay saabuun.
Waa muhiim! Marka la isticmaalayo cajalado cajalado ah, lakabka rinjiga hore ayaa hoos u dhigi kara, sidaas awgeed waxaa lagama maarmaan ah in lagu rinjiyo.
Nidaamkani waa mid aad wax ku ool ah, lakiin waa ilaalin ku-meel-gaar ah oo ka qabow qabow. Iyadoo bilawga maalmaha diiran, rinjiga waa in laga saaraa. Laakiin xilligan xaadirka ah waxaa jira dhibaatooyin cusub oo lala xiriiriyo ka saarista si taxaddar leh oo waraaqda ah.
Kaydinta tamarta tamarta
Isbedel cusub oo ku saabsan daaqada daaqadaha waa isticmaalka filinka tamarta. Mabda'a hawlgalka ayaa ah in la barbardhigo nalalka infrared iyo hoos u dhigista kulaylka. Filimadan oo kale xilliga qaboobaha ayaa guriga ka ilaalinaysa qabow, iyo xagaaga ayaa ka hortagi doona kuleylka qolka. Waa caqabad wanaagsan oo lagu ilaalinayo jawiga wanaagsan ee guriga. Ilaalinta noocan oo kale ah ayaa lagu dabaqi karaa daaqada oo dhan, oo ma ahan oo keliya muraayadda, taas oo abuuraysa dahaar-kuleyaal dheeraad ah. Filimka tamarta badbaadiya ayaa sidoo kale loo yaqaan 'koobka saddexaad'. Waxaa jira filim lagu daboolan karo daaqada oo wuxuu sameeyaa difaac dheeraad ah 0.5-1 cm ballaaran kadib marka la rakibo, heerkulka qolka wuxuu kici karaa 3 ama xitaa 7 ° C. Codsiga habkani wuxuu u habboon yahay daaqadaha caaga ah iyo daaqadaha.
Polyfoam, xumbada poliurethane, dharka basaltanka, caag xumbo, wax shimbir ah
Qalabka kale waxaa loo isticmaalaa daboolka kuleylka ee daaqadaha. Tusaale ahaan, caag xumbo, dhogorka paraffin, caag foorno ama xumbo leh polyurethane. Tixgeli qaababka arjiyada walxahan mid kasta. Isticmaalka xarkaha xayawaanka ayaa kaa caawin doona in daaqadaha laga ilaaliyo. Mawduucani si fudud ayaa u gali karaa meelaha banaan ee u dhexeeya albaabada iyo qaabka daaqada. Dharbaaxada xajinta ee cufan ayaa si fiican ugu habboon in la mariyo daaqadaha daaqadaha ku wareegsan wareegga wareegga, ku haboon oo u oggolow daaqada in loo isticmaalo jiilaalka. Haddii aad dhejisid noocaan safar dhawr ah, waxay hagaajineysaa qadada qolka. Si aad u xirtid farqiga in ka badan 2 mm iyadoo la isticmaalayo xumbo. Si aad u buuxiso naqshadaha leh xargaha xumbada, isticmaal shayga khafiifka ah iyo jajabka, sida fooriiyaha ama mindida miiska. Ka dib marka la buuxiyo daldaloolooyinka, waxaa lagu shaabadeeyaa cajalad, taas oo bixisa rinjiyaal dheeraad ah. Kaabashooyinka yaryar waxay ku habboon yihiin maadada paraffin. Isticmaalka qubeyska qubeyska, waa la kululeynayaa ilaa 60-70 ° C - xaaladdan waa sahlan tahay in la geliyo siriinj - ka dib marka ay buuxiyaan farqiga.
Si habboon u xafid khudaarta gurigaaga.
Paraffin waa calaamad aad u fiican. Haddii farqiga uu ku filan yahay, ka dibna isticmaal dharka kabadhada oo isku dhafan leh paraffin. Laakiin ilaalintani waxay ku filan tahay hal xilli oo keliya. Waxaa suurtogal ah in lagu diiriyo daaqadaha alwaaxda ah iyadoo la marinayo shuban (akrilil ama silikoon). Shaanadahaas waxaa lagu dabaqayaa xuduudda u dhaxeysa muraayadda iyo qaabka, iyo sidoo kale inta u dhaxaysa daaqadda iyo profile window. Si aad u xirtid daaqadaha, waa in aad marka hore ka saartaa duubista, nadiifinta qashinka oo ku dabool shubka marinka ku yaala galaaska daaqada.
Waa suurtogal in la soo dhejiyo meelaha kuxiga ka dib marka qalalan dhamaystiran ee shaabbadeeyaha. Waa in maskaxda lagu hayaa in ka dib markii ay burburinayaan duubista, waxaad u baahan kartaa kuwa cusub, maaddaama ay inta badan jebiyaan. Sidaa darteed, maaha inaad diirimanto daaqada, laakiin sidoo kale waa dayactir.
Waa muhiim! Si aad u xirtid khariidadaha daaqadaha alwaaxa, waxaad isticmaali kartaa macmacaan qoryo ama isku dar ah jeexitaan iyo jeeso. Ka dib marka la sameeyo shaqada rinjiga, lacaga iyo rinjiga waxaa loo isticmaali karaa sida jaakad dhameystiran. Si ka duwan lamaanaha ama paraffin, dhererka noocaas ahi wuxuu dhacaa dhibaato la'aan.
Bacaha dheeraadka ah waxaa loo isticmaali karaa xayawaan jilicsan, oo loo isticmaalo qurxinta gudaha iyo dibedda gudaha. Ka hor intaan la isticmaalin xumbada waxaa lagama maarmaan ah in lagu dhajiyo dusha sare: ka saar xoorka iyo xayawaankii hore. Wixii dabaysha cirridka ah, waxa fiican in la isticmaalo xumbada xaashida, taas oo ku habboon in la isticmaalo oo leeyahay hanti dabaysho kuleyl ah. Xuubka ayaa xayiray xayndaabta iyo dildilaaca oo dhan ayaa la shaabadeeyey. Mesh dib loo milicsaday waxaa lagu dhajiyay saldhigga xumbada, ka dibna mashiinka ayaa la isticmaali karaa oo rinjiyeeyaa. Dharka saafiga ah, sida xumbo, waa qalab aad u fiican. Isticmaalka maaddadani waxay u oggolaanaysaa in ay diirimaaddo dabacsanaan iyo daaqadaha daaqada. Faa'iidooyinka waxtarka leh waxaa ka mid ah iska caabinta dabka. Marka loo isticmaalo walxahan qalajinta dibedda ee xayawaanka, dhammaystirid dheeraad ah ayaa loo baahan yahay, maadaama maaddadani ay si fudud u noqonayso qoyaan oo ay lumiso guryaha dabaysha.
Ku samee derbi xajineysa goobta.
Mararka qaarkood rinjiga fudud ama shaabbadeeyuhu kuma filna inuu daaqadaha ka ilaaliyo. Tusaale ahaan, marka ay jiraan waxyaaba badan oo ka jira daaqada ama iyada oo loo marayo isku xirka furitaanka iyo qaabka. Xaaladaha noocaas ah, waxaa fiican in la isticmaalo xumbada xaabada. Iyada oo kaalmadu maaha inaad diiriso oo kaliya diirada, laakiin sidoo kale ka soocida meesha bannaan daaqadda daaqadda. Laakiin inta lagu jiro xiriirka dheeraadka ah ee xumbada xajmiga leh ee dibedda dibedda ah, waxay ka sii daraysaa guryaha daboolka ah waxayna xitaa qayb ahaan burburin kartaa. Xayiraadda noocan oo kale ah waa xal aad u fiican oo la awoodi karo dhibaatada kulaylka.
Waa muhiim! Si aad u xirto, waxaad samayn kartaa dharkaaga gaarka ah. Si aad tan u sameyso, isku dar 1 qaybood oo naaso ah iyo 2 qaybood oo ah stucco leh biyaha dheeraadka ah. Mashiradani waxay noqon doontaa mid aad u fiican oo xajinaysa xumbada.
Waxa kale oo aad xiri kartaa naqshadaynta daaqada adigoo isticmaalaya astaanta tuubada. Waxay ku kala duwan tahay kalsooni sare iyo nolol wakhti dheer oo adeegyo ah oo u oggolaanaya inay u qaadaan habab aan caadi ahayn oo kulul. Waxaa fiican in lagu rakibo nooca insulator sida xilli-diireedka, laakiin waad ku guuleysan kartaa bilawga cimilada qabow, waxa ugu muhiimsan waa in heerkulku aanu hoos udhicin -10 ° C. Waxay ku xiran tahay qaabka daaqada iyada oo leh qalab isku-dhejis ah. Caddeynta noocan oo kale ah way shaqeyneysaa, laakiin natiijadu ma qaadan doonto muddo dheer. Qalabka tuubbada waxaa loo isticmaalaa in lagu xakameeyo daaqada iyadoo loo eegayo tiknoolajiyada "iswiidhishka".
Inta aanad bilaabin shaqada daaqadaha cimilada, waa lagama maarmaan in la go'aamiyo xajmiga shaabadda. Si arrintan loo sameeyo, waxaad isticmaashaa gabal dhoobo oo lagu duudduubay polyetylen. Waxaa lagu dhejiyaa faraqa u dhexeeya daaqada daaqada iyo qaabka iyo daaqada. Iyada oo ku xiran hadba inta ay le'eg tahay farqiga, shaabadda tuubbooyinka ee E, P, D ayaa loo adeegsadaa Si loo rakibo shaabadda, waa lagama maarmaan in la sameeyo booska taageerada. Fixinta marinka leh koollo. Isticmaalka habkani waxa uu noo ogolaanayaa inaan daaqadaha dusha ka saarno muddo 20 sano ah, ama in kabadan.
Horumarka dabka daaqadaha iyo alwaaxyada
Mid kasta oo ka mid ah hababka rinjiga kor ku xusan waa mid wax ku ool ah. Hase yeeshe, shaqo kasta oo lagu qabto kakiska ayaa aad ufiican marka loo isticmaalo si gooni ah. Aynu eegno sida ay u shaqeynayaan.
Tallaabo 1: Beddel Seeraha
Dadka ay la kulmaan dhibaatada jebinta daaqada daaqadaha, marka hore wax walba beddel shaanadda. Waxaa ugu wanaagsan in shaqadan lagu sameeyo qalalan iyo diiran. Beddelidda shaabadda daaqadaha alwaax waa mid sahlan. Laakiin waxyaallaha balaastiggu way ka duwan yihiin - shaabadda iyaga ka baxsan 5 sano ka dib hawlgalka. Waxaa lagu talinayaa in la bedelo mid ka mid ah kuwa horay u soo xidhay oo aan la qabsan karin shaqadooda. Xaaladaha kale, adoo isticmaalaya macdanta silikoon dhowr jeer sanadkiiba, waxaad kordhin kartaa nolosha shaabadda. Si aad uhesho shaanadda dufan ee daaqadaha, waa inaad uxiisaa mid hore oo aad dib uga baxdid. Ka hor inta aanad galin shaabad cusub, waa inaad tirtirtaa weelka boodhka. Shuban cusub ayaa lagama maarmaan u ah inuu soo iibsado dhumuc isku mid ah, iyo sidoo kale, isla hal-soo-saaraha. Ku dheji sanduuq cusub nadiifinta nadiifinta. Si loogu sahlo hawlgalkan, waxaa lagula talinayaa in laga saaro garaacista, sidaas awgeed, shaabadda ku jirta wareegga iyo daaqada ayaa la beddelayaa. Si aad u bedesho gogol xiirka ah oo ka ilaalisa galaaska, waxaad u baahan tahay inaad sameyso hawlo badan oo waqti-dheer ah.
Waa muhiim! Bacaha ka yimaada shirkadaha kala duwan waxay leeyihiin qaab kale, waxayna sidoo kale u kala duwan yihiin midabka.
Marka hore, ka saar boomadaha ku jira galaaska. Hadda waxaad si fudud uga saari kartaa galaaska iyo shubka ka soo baxa grooves. Sida marka la badalayo shaabadda albaabada, grooves waa in la nadiifiyaa. Shuban dhuxul waxaa lagu talinayaa in la jarjaro 6 cm, oo kiiskuna wuxuu ku haboonaan doonaa hareeraha wareegga wareegga ee wareegga galaaska. Boorso cusub ayaa la dhigayaa meelo, ka dib markaad wax walba soo celin kartid. Faahfaahin dheeri ah ee shaabbadeeyaha, waxaad isticmaali kartaa xabagta.
Tallaabada 2aad: Isku hagaaji xidhista (dhismayaasha cusub)
Dad badan, shaqadani waxay ku jirtaa daaqadaha caaga ah sida muuqaal, laakiin kuwa wax soo saara waxay ku talinayaan inay hagaajiyaan xajinta 2 jeer sanadkii. Xilli kasta mar waliba waa inuu ahaado adiga. Si aad u sameyso isbedelkan, waxaad u baahan doontaa 4 mm Dhamaan Allen or pliers, iyadoo ku xiran naqshadeynta daaqada. Dhamaadka baalashka waxaa jiraya khatar ah halis, taasoo loo baahan yahay. Cinjirku waa qalab loogu talagalay in la hagaajiyo taakulaynta caleenka daaqada. Qalabka caagagga ah waxaa suurtagal ah in la sameeyo qaababka jiilaalka iyo xilliga xagaaga, iyo sidoo kale celceliska, taas oo la dejiyay markii hore.
Dhiso aqalka dhirta lagu koriyo ee polycarbonate, qoryaha iyo tuubooyinka polypropylene.
Dib u soo noqoshada xagjirnimada, waxaad hagaajin kartaa xakamaynta furaha. Isticmaalka qaabka qaboobaha wuxuu kuu ogolaanayaa inaad diirimaad ku haysatid qolka sababtoo ah siyaabo badan oo qumman. Iyo bilawga maalmaha diiran, daaqadaha waxaa loo wareejiyaa qaabka xagaaga, taas oo u ogolaaneysa kor u qaadista hawada. Xaaladaha qaarkood, isbedelkan kuma filna, sidaa darteed samee isbedel dheeraad ah. Haddii naqshadeynta daaqada ay bixiso hawo-qaboobaha xilliga qaboobaha, kadibna dib u habeyn iyo wareegyada hoose iyo sare. Xaaladaha aan shaqeyneynin, waxaa ku filan oo kaliya in la hagaajiyo wareegyada hoose. Meelahaas oo kale, waa inaad furto daaqad. Meelaha u furan, u rog daboolka hawada. Kaliya ee booskan ayaa loo marayaa hagaajinta sare. Dib-u-soo-kabashada wax la qabadsiinta, waxaad bedeli kartaa xakamaynta boodhka ilaa qaabka.
Talaabada 3aad: Meelaha Duufaanta leh
Meelaha dabayshu waxay isticmaali karaan qalab kala duwan. Kuwa ugu caansan waa iyaga xumbo leh polystyrene, xumbada leh polystyrene iyo gogol leh lakabka chloride polyvinyl. Dhammaantood waxay bixiyaan rinjiyeyn kuleyl ah. Перед тем как определиться с материалом для уплотнения, необходимо исследовать внешние и внутренние откосы. Некачественно выполненные работы или износ материала могут привести к тому, что теплоизоляция помещения нарушится.Xaaladahan oo kale, ka hor intaysan bilaabin diirimaad, waa inaad ka saartaa agaasta hore oo mar labaad ku rakib. Duufaha kulaylka waxaa loo isticmaali karaa in lagu xakameeyo godadka gudaha. Ka dib markii ay si taxaddar leh u xoojiyaan oo ay xoojiyaan, waxay soo saaraan godad qurux badan oo ka mid ah ceelasha. Dharka saafiga ah waxaa loo isticmaali karaa sida lakabyada noocaas ah. Fursad kale waa in la xoqo xumbada dusha sare ee gudaha. Ka dibna waa inay ahaato mid dhoobo ah ama lagu daboolo qalajiyaha.
Ma taqaanaa? Waxaa jira khuraafaad ah in qalabka kuleylka-kuleylka ay ka cabsi qabaan jiirarka, laakiin ma jiraan waxyaabo sidaas oo kale ah.
Qaabka kale ee dhameystirka iyo xidhitaanka waa rakibidda loo yaqaan "sandwich sanders". Gudigan waxaa jira horeba lakab-kuleyliye kulul, taas oo ka dhigaysa ikhtiyaarka ku habboon ee xakameynta dabacsanaanta. Qalab dheeraad ah, lakabka suufka ah waxaa loo isticmaali karaa saldhigga guddiga sandwich. Qodob muhiim ah oo ku saabsan geedi socodka hawada kulul ayaa ah mid aan la aqbalin joogitaanka goobaha hawada. Si looga fogaado dhibaatadaas, waxaad isticmaali kartaa adheeyaha gaarka ah. Waxaa loo adeegsadaa wareegga wareegga dusha sare leh, iyo sidoo kale meelaha dushiisa. Kala-bixinta si sax ah loo isticmaalo wuxuu kor u qaadaa adherka wanaagsan ee dusha sare ee jilicsan.
Talaabada 4aad: Ku shaqee daaqadaha
Meelaha kale ee dhibaatada ah ee xayiraadda daaqada waa daaqadda daaqadda. Kuraasta liidata waxay keeni kartaa dhibaatooyin waaweyn inta lagu jiro hawlgalka. Tusaale ahaan, haddii booska ka hooseeya xayiraadda aysan ku filneyn xumbo, waxaa jiri kara meelo hawo oo jebisa rinjiga. Dhibaatada kale waa burburinta xumbada iyada oo ay saameynayso culeyska farsamooyinka ama waxyaalaha dabiiciga ah.
Waa muhiim! Marka lagu rakibo dhismaha daaqadaha xilliga qaboobaha, waxaa lagama maarmaan ah in la isticmaalo soosaarista "jiilaalka" jiilaalka, kaas oo bixiya si fiican.
Xaaladahaas oo kale, dib-u-xayeysiin leh xajinta xajinta ayaa loo baahan yahay. Si loo fuliyo shaqada noocaas ah, waxaa ugu muhiim ah in laga saaro xumbada hore, ka dibna buuxi booska leh lakab cusub. Laakiin walxahan oo kale ma ogolaanayo inuu xiro waxyaabo yar yar. Waxaad ku xiran kartaa adigoo isticmaalaya shuban. Waxay si fiican ugu dhex gashaa dildilaaca oo gebi ahaanba ku xiraa. Intaa waxaa dheer, in ay si fiican u diido biyaha. Isku-dubaridka qalabkan oo kale ayaa u oggolaanaya in la xiro dhammaan goobaha dhibaatada.
Tallaabo 5: Dhalashada muraayada
Mararka qaar, ka dib marka la joojiyo dhammaan dhibaatooyinka, kulaylka ayaa lumaya heer heer sare ah. Xaaladaha noocaas ah, si loo hubiyo in rinjir dabaysha lagu daboolo galaaska. Maaddooyin kala duwan ayaa loo isticmaali karaa tan. Tusaale ahaan, ilaalinta wanaagsan ee ka soo kulul heerkulka hooseeya, waxaad ku dhajin kartaa cajalad ku saabsan wareegga muraayadda iyo qaabka. Sida kuleyliyaha loogu talagalay dhalooyinka waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa filim tamar leh.
Wixii dijitaal ah ee daaqadaha waxaa loo isticmaali karaa oo lagu duubi karaa filim, ama, sida loo yaqaan, filim leh naqas. Filimkan waxaa laga iibsan karaa dukaanka qalabka dhismaha. Waxay ka caawisaa inay guriga ka ilaaliso qabowga waxayna hagaajisaa waxtarka tamarta ee dhismaha. Waxay qaadataa waqti aad u yar oo lagu rakibo, kadibna uma baahnid daryeel gaar ah. Filimka ayaa si isdaba-joog ah loo xakameyn karaa loona diiri karaa. Fududaantu kama horjoogsanayso in qorraxdu jirto. Maqasyo, farsamayaqaan iyo filim leh naqas ayaa loo baahan yahay rakibidda. Ka jar filimka mugga ee muraayadda oo qoyan dhinaciisa. Ka dalbo filimka muraayadda qoyan ee dhinaca qoyan. Biyaha waxay bixisaa adhesion wanaagsan oo dusha sare leh. Filinka ku-xiran si fiican ayaa loo dhigaa. Naxaaskani wuxuu ka caawiyaa inuu ka ilaaliyo galaaska ka luminta kulaylka aan loo baahnayn, iyo ugu muhiimsan - waa hab aad u habboon oo dhaqaale ahaan. Isticmaalka filinku wuxuu ka baxayaa wax ka baxsan, kaas oo sahlaya daryeelka daaqada ka dib marka laga saaro shaabadda.
Talaabada 6aad: Nidaamka dibedda ka baxsan
Dhismaha dibedda waxay ku diirisaa dhiiqada iyo ebb. La'aanta xayiraadda kuleylka ah ee xayawaanka dibadda ah uma ogola inay si fiican u ilaaliyaan daaqadaha laga bilaabo diyaarinta iyo qabow. Qalabka kuleylka ah ee xayawaanka dibedda ah, caag xumbo leh oo dhererkiisu yahay 5 cm iyo shabakad fiilo ah ayaa loo isticmaalaa. Qurxinta meelo ka baxsan dibadda waxaa badanaa la socdaa kuleylka buuxa ee dhismaha, laakiin shaqadan ayaa sidoo kale loo samayn karaa si gooni ah.
Waa muhiim! Xayawaanka waa in ay ka fujiyaan qayb ka mid ah daaqada daaqadda oo si dhammaystiran u xidhaan seeraha shirarka.
Hannaanka waxqabadka noocan oo kale ah, dhirbaaxada caagga ah ee hore loo diyaariyey ayaa si adag loo xirxiray dusha hore loo nadiifiyey. Dhamaadka hawshan oo kale, xumbada waa in la miiro, taas oo ka ilaalin doonta burburinta kale. Marka la samaynayo shaqada rinjiga, waa in la xusuustaa in si sax ah loo qeybiyo iftiinka qolka, meelaha yaryar waa in ay leeyihiin xagal muuqaal leh marka loo eego daaqada. Biyaha - waa meel aad u muhiim ah si loo hubiyo xakameynta daaqada. Si looga hortago qoyaan ka soo jimcsan, jiirku waa inuu lahaadaa 5 ° bevel oo ka soo baxaya 4 cm dhismaha, iyo geesaha dhinaca waa in ay kor u kaco. Foomkani wuxuu u oggolaan doonaa in ay si xor ah u socodaan iyada oo aanad gashanayn daaqada. Ilaalinta dheeraadka ah ee ka soo baxa qoyaanka, kursiga dib u celinta daaqada iyo duufaanka ayaa weliba lagu shaabadeeyey.
Sida loo xiro filimka kuleylka kuleylka
Ilaalinta noocan oo kale ah sababtoo ah qaabkeeda kala duwan ee lakabka ayaa leh hoos u dhig kulaylka kulaylka. Saamaynta badbaadinta tamarta waxaa bixiya farqiga hawada. Ilaalinta 15 mikron ayaa kuu oggolaanaya inaad heerkulka qolka ku kiciso 3 ° C. Si aad u rakibid, waxaad u baahan doontaa mindi, maqas iyo timo jareer. Qaab dhismeedka qoryaha, filimka ayaa loo isticmaali karaa dusha sare ee daaqada, iyo kaliya galaaska. Haddii aad ku dhajiso dusha dhammaan daaqada daaqada, waa lagama maarmaan in la xiro farqiga, iyo sahlanaanta hawlgalka - ka saar gacanta. Daaqadaha waa inay marka hore si fiican u nadiifiyaan oo ay hoos u dhigaan.
Baro sida loo doorto caws-cirin, saldhig ballaaran, gogol-qallalan, shidaal gaas ah iyo tareen yar-yar.
Bandhiga laba-geeska ah waxaa lagu dhajiyaa meel nadiif ah wareega wareegga. Filimku wuxuu ku xiran yahay laba lakab, sidaas darteed waxaad u baahan tahay inaad kala soocto. Naqdi filimka si uu u cabbiro daaqada. Waa in maskaxda lagu hayaa in filimku uu ku dhegsan yahay cajaladda, sidaas awgeed waa muhiim in la sameeyo saami 2 cm. Ka hor intaadan sax ahayn hubi saxnaanta cabirrada. Haddii dhammaan cabbirada saxda ah ay sax yihiin, markaa waxaad ka saari kartaa weelka warqadda difaaca oo leh cajalad labajibbaaran leh. Shaqo dheeraad ah waxaad u baahan doontaa caawinaad. Si tartiib ah u qoorta filimka dusha sare ee daaqada iyo koollada wareegga wareegga.
Soo ogow waxa loo yaqaan 'thermal drive for greenhouses.
Waqtigan xaadirka ah, waad iska indha tiri kartaa barafka qaabka. Marka la xaddidayo lagama maarmaan ma aha in si xooggan loo faafiyo filimka, maadaama uu leeyahay qaab dhismeed oo hoos u dhacaya. Si loo kabo laalabka, isticmaal dharbaaxiyaha. Saameynta hawada kuleylka filimku waa mid sahlan oo degaana. Siyaabo kale oo loo xiro daaqadaha waa in si toos ah loogu dhajiyo filimka dusha sare ee muraayadda. Xaaladdan, qaybta galaaska ayaa laga saarayaa qaabka, ka dib markii taas lagu dabaqi karo daaqada. Waxay leedahay dherer kale oo dhinacyada, kuwaas oo mid ka mid ah la metalleeyey. Waxaa lagama maarmaan ah in la saaro filimka ku yaal galaaska ku yaala dhinacan. Si aad u dhejiso muraayadda qoyan biyo iyo siman. Hawlaha shaqada waxaa lagama maarmaan ah in la hubiyo in curisyada ama xayawaanka aan la abuurin. Sidaa daraadeed, waxaynu eegnay habab sahlan oo la awoodi karo si looga caawiyo in daaqadaha laga ilaaliyo. Si kastaba ha noqotee, fursada ugu fiican ee looga hortago qaboojinta iyo qabowga waa mid ka mid ah shaqooyinka kuleylka. Hadda waxaad taqaanaa sida loo daboolo gurigaaga, si dhibaatooyinka mustaqbalka leh daaqadaha duufsanaya aanad yeelan doonin.